Indawo ye-Bakgatla Resort - iPilanesberg National Park - eduze neSun City
Indawo ye-Bakgatla Resort
iPilanesberg National Park, eduze neSun City
I-Pilanesberg National Park i-Pilanesberg National Park eduze ne-Sun City iyingxenye yezindawo eziphambili kakhulu eNingizimu Afrika futhi isendaweni engavamile ye-volcanic.
I-Home Elephant, Lion, Rhino, Buffalo kanye neLeopard kanye neCheetah, i-Brown Hyena kanye ne-Sable Antelope ehloniphekile, iPilanesberg National Park ngaseSun City ihamba ngamahora amabili ukusuka eGoli esifundazweni saseNorth West, eNingizimu Afrika.
I-Bakgatla Resort igcinwe ngaphakathi kwemingcele yePilanesberg National Park ngaseSun City, okuyinto engamamitha angu-20 ukuhamba. Izivakashi zingase zijabulele i-Big Five safari eduze ne-Sun City futhi zifunde ngezinye izilwane zasendle ezihle futhi zihlolisise zonke izikhungo ezitholakala eSun City.
I-Pilanesberg National Park ineDamu lakwaMankwe esigxileni sayo futhi liphakeme ngaphezu kwamathafa ase-bushveld. Ngokuhamba kwesikhathi, umoya namanzi baye bafaka indawo ehlabayo emangcwabeni, ama-rocky outcrops, izigodi ezinamapulangwe namahlathi. Izindawo eziningi zeMatshe ne-Iron Age zihlakazekile kuyo yonke epaki.
Ipaki ikhona ngaphakathi kwendawo yokuguquka phakathi kweKalahari eyomile kanye nohlaza oluphansi lwe-Lowveld, okuthiwa yi-bushveld. Ukuqothulwa okuhlukile kwezilwane ezincelisayo, izinyoni nezimila kwenzeka ngenxa yale ndawo yokuguqula.
Izinkomba zendlela usuka e- OR Tambo Airport
Njengoba usuka esikhumulweni sezindiza uthathe indlela eya ePitoli - R21. Njengoba useduze nePitoli uthatha iN1 North ukuya ePolokwane. Manje bheka futhi uthathe i-N4 West ukuya eRustenburg. Kulesi sigaba somgwaqo uzodlula amasango amabili. Dlulisa ama-turnoffs eHartebeespoort, eBrits naseRandburg. Manje qaphela ukujika okulandelayo ku-Sun City, Bapong, Majakaneng - R556. JIKA KWESOKUDLA UNGADLULELI E-RUSTENBURG
Kusuka eSandton ukuhamba ngasenyakatho kuhamba noWilliam Nicol Drive eya emgwaqeni ohlangothini lwe-Witkoppen Road. Jikela ngakwesokunxele ungene e-Witkoppen Road ukuya eLanseria / Roodepoort.
Jikela ngakwesokudla emgwaqeni noHans Strijdom Extension emgwaqweni eya ngaseBrederstroom naseLanseria - R512. Dlula ibhuloho phezu komgwaqo omkhulu we-R28 Krugersdorp / Pretoria, udlulise i-Lanseria turnoff bese uqhubeka uqonde. E-T-junction thatha ngakwesobunxele ngakwesokunxele ku-R512 ukuya ku-Magaliesberg / Brits Qhubeka kulo mgwaqo uze ubone ibhodi yesignesha yase-Sun ngakwesobunxele sakho. Jikela ngakwesokudla ku-R512 ukuya eBrits uphinde uwele ibhuloho phezu kweDamu le-Hartebeespoort.
Esikhathini esilandelayo seT-junction jikela ngakwesokudla ku-R512 kuya ku-Brits. Landela izimpawu zokuqondisa. Endleleni engu-4 yima ngakwesokunxele uye eRustenburg / Sun City. Esikhathini sokubeka uphawu R27 Rustenburg / Brits sibheke ngakwesokudla. Ibhuloho ibheke ngakwesokunxele uye ngaseRustenburg. Qhubekela esiteji ngakwesobunxele, thatha slipway futhi uqhubeke nomgwaqo omkhulu we-N4. Manje qaphela ukujika okulandelayo ku-Sun City, Bapong, Majakaneng - R556. YETHU LOKUPHUMA - UNGAKHULU KURUSTENBURG
Ukushayela kusukela ku-R556 kuya e-Bakgatla Resort
Phezulu kwendlela yokuvula evulekile ukuya ku-Sun City / Bapong. Ngendlela yesine ye-stop stop ujika ngqo ku-R510 (25km / 16 miles) ukuya eMogwase. Jikela ngakwesokunxele ku-Pilanesberg National Park. Ngendlela yesibili ye-stop-turn jikela ngakwesokudla. Dlulisa iSango Liningi futhi uhambe ngqo uze ufinyelele e-T-junction. Jikela ngakwesokunxele bese ulandela umgwaqo uze ufike esangweni leBakgatla.